Iindawo ezi-10 eziphezulu zokuBona eAustralia | Ukuhamba kwe-Absolut
UAna L. | | Ostreliya
I-Australia yindawo enkulu yomhlaba ejikelezwe lulwandle, lilizwe lesithandathu ngobukhulu emhlabeni elinendawo yeekhilomitha ezisisi-7.686.850, apho sidibanisa indawo yeziqithi zayo. Kwaye uninzi lwazi uninzi lwabemi balo lusekwe kwizixeko eziselunxwemeni, kwaye ukwazi, i-Confederation yase-Australia isengumbuso womgaqo-siseko, onenkqubo yepalamente, apho uKumkanikazi u-Elizabeth II ngoku eyintloko yelizwe lase-Australia kwaye esebenzisa isihloko esisemthethweni seNdlovukazi yase-Australia.
Ukuba uthathe isigqibo sokuba eli candelo lehlabathi yindawo yakho elandelayo, Ndikunika iindawo ezili-10 eziphezulu ongenakuphoswa kukhenketho lwakho ukonwabela ukhenketho e-Australia. Ukwenza uluhlu ndiza kukuxelela ukuba zithini:
Ipaki yeSizwe yeKakadu
Kwaye ngoku sihamba, nganye nganye:
1 ISydney, ichweba elivula iOstreliya
2 ICairns, eyona ndawo ithandwayo
3 IGold Coast, iilwandle ezifanelekileyo zokuntywila emanzini
4 IFraser Island, indawo eyiLifa leMveli yeHlabathi
5 IMagnetic Island, isiqithi sokutshintsha kweekhampasi
6 IiWhitsundays Islands, okanye isithintelo esikhulu somthi
7 Iliwa le-Ayers, ilitye labaphambukeli
8 Indlela enkulu yolwandle
9 IPaki yeSizwe yaseKakadu, yeyona mizobo indala yoluntu
10 Tasmania, ukhenketho lokuzonwabisa
ISydney, ichweba elivula iOstreliya
I-bay ye Sydney Yenye yezona zintle e-Australia, kunye nesango lokwenyani eliya kwilizwe. Idolophu enkulu yeyona dolophu inabantu abaninzi kwaye yasekwa ngo-1788.
Ezinye zeendawo ongenakuphulukana nazo kwesi sixeko sineenkcubeko ezininzi, kunye nobomi bobusuku obubanzi obugxile kwindawo yaseNewtown naseAnandale, zi-opera, loo icon yakhiwa ngo-1973 apho sichonga khona isixeko, iholo ledolophu, iHolo yesiXeko seSixeko, I-State Theatre, iTheatre Royal, iSydney Theatre kunye neWharf Theatre.
Ngaphandle kolu tyelelo lwenkcubeko, ndicebisa ukutshona kwelanga ngaphezulu kweBay Bridge kunye ne-aquarium yayo.
ICairns, eyona ndawo ithandwayo
Nangona iCairns sisixeko esincinci, ngonyaka ifumana malunga nabakhenkethi abazizigidi ezi-2, kwaye yindawo ethandwa kakhulu ngabantu bamanye amazwe ngenxa yemozulu yetropiki kunye nokusondela kwayo kwiGreat Barrier Reef ngaphantsi kweyure ngesikhephe, iDaintree National Park kunye neCape Tribulation, malunga neekhilomitha ezili-130.
Le yindawo ekhuthazwayo ukuqala ukhenketho e-Australia kwaye uqale apha iindlela eziya eCooktown, usingasiqithi weKapa kunye neAtherton Plateau.
IGold Coast, iilwandle ezifanelekileyo zokuntywila emanzini
igolide Coast Yisixeko ngokwaso, kwaye ikwindawo yeelwandle ezintle kunye namaza amakhulu afanelekileyo ukuntywila kwiPacific. I-Surfers iyakwazi okuninzi malunga noku, kodwa bathi i-Snapper Rocks Superbank, kufutshane neCoolongatta, ibinamagagasi aphezulu emhlabeni. Unokuma eCurrumbin, ePalm Beach, kwiBurleigh Heads, eNobby Beach, eMermaid Beach naseBroadbeach. Ukuze ube namaza acocekileyo kwaye ungagcini abantu, iSunshine Coast iyacetyiswa eCaloundra, Moolooloba, eMaroochydore, eCoolum Beach naseNoosa Heads, apho amahlathi afikelela kunxweme lolwandle.
IFraser Island, indawo eyiLifa leMveli yeHlabathi
IFraser Island ibiyindawo yeLifa leMveli yeHlabathi ukusukela ngo-1992, kwaye sesona siqithi sikhulu sentlabathi ehlabathini kwizikwere zeekhilomitha ezili-1.630. Igama layo kulwimi lwabeMi Bomthonyama, iK'gari lithetha iparadesi, kwaye njengoko unokucinga. Ngendalo eyahlukileyo, ukhenketho olwenzileyo lugcina umtsalane kunye nokuhlukahluka kwesi siqithi. Ukuba uza kuyindwendwela, baya kukunika uthotho lwemiyalelo xa ulapho, njengokungazondli ii-dingoes. Ngapha koko, isiqubulo sesi siqithi kukuba uhlala uhleli kuso, ubukho bakho kufanele ukuba bubonakale kancinci kwaye bungonakalisi kangangoko.
IMagnetic Island, isiqithi sokutshintsha kweekhampasi
Igama laso Magnetic Island livela nini UJames Cook ngo-1770 waqaphela ukuba ikhampasi yenqanawa yakhe itshintshiwe xa edlula kufutshane, ngenxa yento awayeyibiza ngokuba "yimagnethi yeziphumo", ukusukela ngoko kuphandwe ngemvelaphi yomsitho, kodwa akukho ngcaciso ifunyenweyo. Ngokwam, ndicinga ukuba le "mpembelelo yemagnethi" ivela kwiilwandle zayo ezingama-23 kunye neentsuku ezingama-300 ezinelanga ngonyaka, ngubani ongazivumeliyo ukuba zibuthe kubo okanye zii-koalas? Kwaye ngaphezulu kwesiqingatha sesiqithi sibhengezwe njengepaki yelizwe, ukukhusela ezi zilwanyana.
IiWhitsundays Islands, okanye isithintelo esikhulu somthi
I-Whitsunday Islands liqela leziqithi ezingama-74 ezikumda weGreat Barrier Reef, kwaye ngamanzi akhuselweyo olwandle lwasempuma, ezinye zazo ziziziqwenga zesanti entle kakhulu, ebanjwe ziingcambu zomthi wesundu omnye.
Le paradesi yetropiki yindawo yokuthandana kunye nezindululo zomtshato kunye neehoneymoons ngeemitha zesikwere, ke ukuba ucwangcisa ukuhamba neqabane lakho sele uyazi ukuba yintoni ehambelana. Abomthonyama beziqithi ngamaNgaro aphakathi kwabona badala babhalwa e-Australia.
Iliwa le-Ayers, ilitye labaphambukeli
Ukudibana kwefilimu kwisiGaba seSithathu (1977) kwandise eli litye, elona litye likhulu emhlabeni, indawo engcwele yaboMthonyama Aṉintlungu kwaye igama lakhe ngubani Uluru.
Ukwakhiwa kwamatye kuphakama iimitha ezingama-348 ngaphezulu komhlaba, kunye neemitha ezingama-863 ngaphezulu komphakamo wolwandle, nangona uninzi lwazo lungaphantsi komhlaba. Isishwankathelo semonolith, esiguqula umbala ngokokuthambekela kwemitha yelanga, silinganisa iikhilomitha ezili-9.4. Abemi bemveli bommandla balungiselela ukhenketho olukhokelwayo kwizilwanyana, iintyatyambo zalapha kunye namabali omthonyama.
Indlela enkulu yolwandle
Enye yeendawo eziqhelekileyo zokonwabela ukhenketho e-Australia yindlela enkulu yolwandle engenanto yakubamonela abangama-66 eUnited States.
Umzila omkhulu woLwandle uhamba ukusuka eMelbourne ukuya eAdelaide kunxweme olusempuma mpuma e-Australia, ulwandle kunye nemilo yayo emikhulu. Uyakudlula phakathi kweengxangxasi ngehlathi elinamahlathi e-Otway National Park kwaye uyokwazi ukubona iminenga eWarrnambool, udlula kumawa eCape Bridgewater ... ulumke, kuba uyakudlula ngokuhenda kwezidiliya kunye neewayini kunye iwayini ezigqwesileyo zase-Australia. Shiya iibhotile ozithengileyo xa ufikile kwindawo oya kuyo.
IPaki yeSizwe yaseKakadu, yeyona mizobo indala yoluntu
Ipaki yeSizwe ICockatoo, eMantla, unokundwendwela kuphela iipesenti ezili-100 ngexesha lonyaka elomileyoUkususela ngoMeyi ukuya kuSeptemba, ngexesha lemvula akunakwenzeka ukufikelela kwiindawo ezininzi. Ukongezwa kwayo kulingana neLizwe lakwa-Israyeli kwaye kukholelwa ukuba iqulethe i-10% yoovimba be-uranium.
Elona candelo linomdla kule paki ziindawo ezikhukulayo, kunye neengwenya zaselwandle kunye neengwenya zikaJohnston, ezibulela ngombulelo imini yonke. Kukwaphawuleka kwakhona ukuba yimizobo eyenziwe emqolombeni e-Ubirr, eNourlangie naseNanguluwur ehlala abantu ngokuqhubekayo ngaphezulu kweminyaka engama-20.000 XNUMX.
Tasmania, ukhenketho lokuzonwabisa
I-Tasmania ngurhulumente wase-Australia, owenziwe sisiqithi sonke saseTasmania kunye nezinye iziqithi ezikufutshane. Lo mmandla utyebile ngamabali abantu ababanjiweyo, oovulindlela, abagawuli bemithi, abasebenzi basezimayini, kutshanje, nabaphembeleli bendalo.
Ubume bayo obunyulu, i-gastronomy kunye newayini ziyabonakala, kunye needolophu ezincinci ezinomoya ococekileyo. Unxweme olusentshona lweTasmania lulungele iiholide zokuzonwabisa, ukwehla ngokukhawuleza komlambo iFranklin. Ndiyayithanda imbono kaloliwe wembali osuka eQueenstown.
Zeziphi iindawo onokuzicebisa ukuba ubone indawo e-Australia? Ngaba ungongeza ezinye kwezi sele sizikhankanyile? Sishiye amava akho.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukuhamba kwe-Absolut » Ukhenketho e-Australia
Uhenry rudas miranda sitsho
Molo ndihlala eBarranguilla Colombia eMzantsi Melika kwaye ndizibonile iindawo zabakhenkethi eAustralia kwaye ndicinga ukuba imihlaba kunye neelwandle zibonakala zithandeka ngakumbi ukuba ndibone imibuliso kubantu bakho
Phendula uhenry rudas miranda
maris valentina sitsho
Yeyona rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr to to chinaaaa
Phendula kumaris valentina
Yeyona nto ibalaseleyo ukuya eOstreliya, bendiyithanda kakhulu.
Umculo wesiRashiya wesiNtu kunye nesinxibo esiqhelekileyo saseRussia
Ulwazi malunga neCuba